Kala Bixinta Dhameystirka Xarun Cusub oo Loogu talagalay Australia - Ellicott Dredges Blog
QAADASHADA IYO QAABILAHA WEYN EE REEF Hoolka Qandaraasku wuxuu dhammeystiray qodista deked cusub oo ku dhagan Australia 'Great Barrier Reef'
Qandaraaslaha Australia ka qodaya, Hall Contracting Pty Ltd ayaa dhowaan dhameystiray qodista dekedda cusub ee 'Mackay Small Fraft Harbor' ee ku taal xeebta bartamaha Queensland. Dekedda cusub, oo ugu dambayntii ka koobnaan doonta marin biyoodka 590 oo qaada maraakiibta dalxiiska ee u adeega Great Barrier Reef, ayaa laga dhisay meel ku dhow hadhuudhka biyaha qotada dheer leh iyo dekedda sonkorta ee Mackay.
Dhismaha aagga cusub ee dekeda ayaa waxaa ka mid ah:
Dhismaha 1,300 m si firfircoon oo deggan oo biyo-xireen ah, oo ay fulisay John Holland Construction.
Xilliga 600,000 m3 ee ciidda cufan dhexdhexaad ilaa qoto dheer ee RL-4.5 m Low Astronomical Tide, 150,000 m3 ee agabkan ayaa loo isticmaalay in dib loogu soo celiyo qayb ka mid ah sawirka loogu talagalay horumarinta ganacsiga mustaqbalka, 350,000 m3 waxaa lagu tuuray iyada oo loo marayo laba saldhig oo xoojin ah oo wadarta ah 3,500 Waxaan u ahay dhisme cusub oo warshadeed.
Soocelinta Dhismaha Warshadaha
Qandaraaslaha hoolka waxay adeegsadeen Ellicott® Brand B890 14-inch jajabinta nuugista (CS) dredge "Kikilu" oo leh go 'kor u gooyo ah oo loogu talagalay 3,500 m riixaya dhismaha cusub ee Warshadaha.
Laba Caterpillar oo ku shaqeeya 18 / 16 ee bambooyin kor u qaada ayaa ku sugnaa khadka. Xarun kasta oo kor loo qaado ayaa lagu rakibay heerka deggeneyaasha xirmooyinka xarkaha si loo hubiyo in waxyeello yar ay ka soo gaarto aagagga ku xeeran. Nidaam kontarool xawaare sare, oo uu hormariyay Qandaraaslaha Hall, ayaa loo isticmaalay in lagu xakameeyo labada saldhig ee taakuleynta fog fog ee ku yaal gogosha qulqulaya.
Gelitaanka gudaha iyo korantada iyo mashiinka RPM ayaa laga ilaaliyay lagana kontaroolay qulqulka, si aad ah ayeyna u wanaajiyeen waxtarka qashinka, isticmaalka shidaalka, iyo bilaabida iyo xirida nidaamka. Tani waxay suurtagelisay saldhigyada kor loo qaadeeyo ee meelaha fog laga hago kuwaas oo sidoo kale lahaa kayd muuqda oo xagga kharashka shaqada ah.
Inaad kudhowdahay Liiska Dhaxalka Dunida ee Liiska Great Barrier Reef Marine Park, oo kamid ah mucjisooyinka dabiiciga ah ee aduunka, mashruuca si adag ayaa looga xakameeyay iyo aragtida deegaanka. Sidoo kale, si toos ah ugu dheggan aagga warshadaha laga buuxiyo waxay ahayd dhul-beereed melaleuca u dhashay oo taageeraya noocyo badan oo ah dhirta la ilaaliyo iyo noocyada fauna.
Sidaas oo kale, Qandaraaslaha Hall waxay diyaarisay Qorshe Maareyn oo Deegaanka oo dhameystiran oo loogu talagalay ansixinta Wasaaradda Deegaanka. Qorshahan ayaa loo fidiyay meel buuxu oo xirxiran oo leh shebekado weir ah oo lagu xakameeyo tayada biyaha wabiga.
Cabbiraadda maalinlaha ah ee cabbirrada tayada leh waxaa ka mid ah:
* Oxygen kala diri
* Cudur daar
kuwaas oo la fuliyay oo lagu diiwaangeliyay warbixinno joogto ah oo loogu talagalay Waaxda Deegaanka si loo baaro.
Qandaraaslaha Hall wuxuu ku amaaney Maamulka Dekeda Mackay Dekeda xirfadeed ee ay kaqeyb qaadatay aaggan, kaas oo dhisi doona xudunta dekedaha ganacsiga iyo dalxiiska.
Xakamaynta meelaynta GPS
Labada qayboodba waxay kuxiran yihiin nidaamka meeleeynta GPS ee loo yaqaan 'Trimble GPS dredge system' oo kuxiran kormeere otomaatig ah. Kumbuyuutarrada saaran ayaa adeegsaday kormeerkan waqtiga-dhabta ah ee la socda GPS-ka si ay si sax ah ugu meeleeyaan cutter-ka diyaaradaha taagan iyo kuwa taagan. Tani waxay runtii muhiim u ahayd Mackay sababtuna tahay xaddiga ballaaran ee dekedda.
Intii lagu jiray wejigii qorshaynta ee mashruuca, aagga la qodayo waxaa loo kala qaybiyey aagag kala duwan iyadoo lagu saleynayo aagga wareega ee qashin kasta. Meelahan ayaa markaa la galay kombiyuutarada dusha si loogu ilaaliyo waqtiga-dhabta ah ee horumarka. Jiin kasta ayaa markaa loo qoondeeyey aag u gaar ah oo loogu talagalay isbeddel kasta. Dhamaadka wareeg kasta, xogta GPS-ka si toos ah ayaa loo falanqeeyay si loo ogaado mugga, baaxadda, iyo saxnaanta qodista.
Mr. Brian Hall, oo ah agaasimaha Hall Qandaraasleyda, ayaa yidhi, “Software-ka GPS-ka ee loo qoondeeyey ee loo adeegsado lalana socdo astaamaha hirarka-waqtiga dhabta ah ayaa noo oggolaaday inaan si kalsooni leh oo sax ah u helno madaxa gooyuhu wakhti kasta oo cayiman. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu ahayd shaqadan iyadoo la fiirinayo inta badan caqliga badan ee 6.5 m. Waxay sidoo kale noo ogolaatay inaan kormeerno hawl wade kasta oo isbarbardhigaya. Tani waxay noo aragtay inaan gaarnay heerar wax soo saar oo aan horay loo arag marka la eego mitir cubic saacadiiba oo ay weheliso saxsanaanta qodista oo macnaheedu yahay inaan wax laga jarin ama dib loo qodin, shaqadu waxay ku timid sifiican waqtiga iyo miisaaniyada. ”
Isku soo wada duuboo, mashruucu wuxuu u ahaa guul dhammaystiran oo loogu talagalay Qandaraaslaha Hall oo khibraddii ay ku hawlgashay ay ammaaneen labada hay'addood ee John Holland iyo Maamulka Dekadda Mackay.
Mashaariicda kale ee Qandaraaslaha Hall ay hada ku lug leeyihiin waxaa ka mid ah: * Qandaraaslaha guud ee Greg Norman waxaa loogu talagalay koorsada Pelican Waters Golf Course ee Caloundra ee Queensland. * Meelaha biyuhu ka soo galaan Pelican Waters. * Queensland Alumina dabadhiig biyo galeen Gladstone, Queensland. www.hallcontracting.com.au